Kuyoba yini ubusika buka-2017-2018 eRussia nase-Ukraine? Isibikezelo esinembile kakhulu se-Hydrometeorological Center seSt. Petersburg naseMoscow kulobu bushi, lapho kuza khona nokuthi iqhwa lizoba
Kuyoba yini ubusika buka-2017-2018 eRussia nase-Ukraine: Isibikezelo esinembile kakhulu sezulu sezulu se-Hydrometeorological Center
Ehlobo lika-2017 ngokoqobo lashaqeka amaMuscovites ngemvula yabo. AbaseRussia bonke babe nokuthile okumangazayo ngakho-kwakubanda kakhulu ngaleso sikhathi kwakungakaze kube khona! Izakhamuzi zaseSt. Petersburg nezenyakatho yeRussia zaziqhathaniswa ikakhulukazi. Lapha izinga lokushisa lomoya liye lafika ku-zero ngoJuni. Abantu ababevele bebheke phambili eholidini elihle kakhulu ehlobo lama-kottage bezwe babengakalungeli ama-vagaries angavamile esimo sezulu. Ngokushesha baqala ukuzibuza ukuthi kuyoba yini ubusika buka-2017-2018 nokuthi ngabe kungenzeka yini ukwethemba "okunembile kakhulu" izibikezelo ze-Hydrometeorological Centre, eyathembisa ukushisa kukaJulayi ngisho nesomiso. Yiqiniso, emsebenzini wabo, izibikezeli zezulu zasebenzisa izinsimbi zanamuhla zokufunda amazinga okushisa emoyeni, umswakama, ingcindezi yasemkhathini. Kodwa, kungakhathaliseki ukuthi imishini yabo yobuchwepheshe yayihlanganisiwe, noma ochwepheshe abasha kakhulu abasebenza ku-Weather Bureau, idatha yabo ayilungile. Isimo sasise-Ukraine. Ngakho-ke, izakhamizi zalo zivame ukwethemba izibonakaliso zabantu ezicacisa ukuthi ubusika buzofika nini futhi zizoletha neqhwa kangakanani nalo.
Ubusika 2017-2018 buzoqala nini eRussia futhi kuzoba njani
Ngenxa yehlobo elingavamile, elibandayo nelinamanzi ezindaweni eziningi zaseRussia, izakhamuzi zezwe asisazi ukuthi yini okufanele zilindele ebusika ka-2017-2018. Uma ukholwa izibonakaliso, ihlobo elimanzi elinemvula elinamandla njalo lithembisa iqhwa elinzima neqhwa ngoDisemba noFebhuwari. "Izithunywa zasebusika zokuqala" - amaqhwa nemimoya zizoqala ngasekupheleni kuka-Okthoba. Kuzobanda, ikakhulukazi ebusuku, noma kunjalo, eduze neshumi leminyaka kaNovemba, usho kakade - ubusika buqalile!
Lapho ubusika buka-2017-2018 buza eRussia nokuthi kuzoba njani
Ngenxa yendawo yayo enkulu, insimu yaseRussia ihlala ezindaweni eziningana zezulu - ezansi, ezisezingeni eliphansi, eliphansi ne-arctic. Abaningi baseRussia bahlala endaweni epholile - kubo, ngokuyisisekelo, futhi izibikezelo zabo zezulu zibikezela. Kodwa-ke, abasenyakatho (abahlala e-Arkhangelsk, e-Murmansk) nabasemakhaya abavela eKrasnodar Territory, eCrimea, eDagestan, bayazi ukuthi ubusika buzofika isikhathi esithile. Enyakatho kakade u-Okthoba uzoletha amaqhwa, ngesikhathi esifanayo eSochi naseYalta usazoshukuma olwandle. Noma kunjalo, kuzo zonke izinkomba, uDisemba, uJanuwari noFebruwari 2017-2018 kuzoba nzima kakhulu kunokujwayelekile.
Ubusika 2017-2018 buzofika nini e-Ukraine futhi kuzokwenzekani
Ukuhlaziya imijikelezo yemvelo ephindaphindiwe, izibikezeli zezulu zase-Ukraine zithi: ubusika 2017 - 2018 uzofika ekuseni futhi kubanda, kukhithiqwe futhi kukhanye. Ezindaweni zaseCarpathians, eKharkiv naseKiev, amaqhwa azoqala ekwindla, eduze noNovemba. Ku-Odessa umkhuhlane uzofika kamuva, ekupheleni kukaJanuwari - February. Lezi zinyanga zizohambisana nemimoya eqinile neziphepho ezingavamile kodwa ezinamandla zeqhwa.
Ababhula ngezinkanyezi banombono: isilwane-umphathi wonyaka ngamunye singathonya izinguquko zesimo sezulu. Njengoba umnikazi we-2018 yi-Dog Dog, ebhekisela ezakhiweni zomhlaba, ubusika, obuqala ngasekupheleni kuka-2017, kungabanda, kodwa iqhwa nesimo sezulu esibandayo ngeke kuvimbele isivuno esihle sezitshalo zasebusika. Iqhwa elimboze umhlaba empumalanga nasenyakatho yezwe ngoNovemba lizokondla umhlabathi nezitshalo ngomswakama, futhi lokhu kungathembisa isivuno esihle.
Isibikezelo somuntu ebusika ngendiza
Ihlobo livunguvungu - ubusika ngeziqhwa zeqhwa.
Ihlobo liyanda - ubusika buqhwa, iqhwa.
Ihlobo selomile, kushisa okushisayo kweqhwa elincane, iqhwa.
Ukuvuna ihlobo kufanekisela ubusika obubandayo.
Isinkwa - kuya ebusika obukhulu.
Ehlobo ehlobo futhi ekwindla efudumele - ebusika eside.
Lapho izintuthwane zikhipha izinqwaba ezinkulu ezinhlobonhlobo ehlobo, bese ulindela ubusika obubandayo nobusika.
Uma izinceba zasendle zidonsa isinkwa sabo emigodini yazo ehlobo, ungalindela ubusika obubandayo futhi obude.
Kuyoba yini ubusika buka-2017-2018 eMoscow - Ukubikezelwa kwezibikezelo zezulu se-Hydrometeorological Center
Ngenxa yehlobo elibandayo nelibanda elinamazinga okushisa emoyeni, okuhluke kakhulu okubikezela kwangaphambili kwezibikezeli sezulu, izakhamuzi zaseMoscow azikwazi ukuthi yini okufanele zilindele kusukela ebusika ka-2017-2018. Yiqiniso, izingane zilindela iqhwa neqhwa elilinganiselayo - lolu hlobo lwezulu luphelele kakhulu sledding kanye nokushushuluza, ukudlala i-snowballs kanye nokulinganisa i-snowmen. Abantu abadala, ngokuphambene nalokho, bebengathandi ukufika endaweni yomsebenzi, benza indlela yabo ngokusebenzisa izimpawu zeqhwa. Noma kunjalo, kuyoba neqhwa ngaphezulu kunabo bonke, ikakhulukazi ngoJanuwari. Amazinga okushisa emoyeni ngeke ahluke ngokulinganisa okulinganiselwe okungaphezu kuka-2 degrees.
Izibikezelo zezulu ezibikezelayo ebusika 2017-2018
Ngokusho kokubikezela kwangaphambili kwezibikezeli sezulu, ubusika buka-2017-2018 sisasimangaza nge-whims, okufana neqiniso lokuthi abantu baseMoscow bahlehlisiwe ehlobo. Isimo sezulu sizobe sinezintandokazi, kanti i-thaws ishintshana ne-frosts. Ngenxa yalokhu, ngoJanuwari noFebruwari kuyoba khona i-sleet. I-Disemba ingaba yinto encane kunaleyo.
Kuyini ubusika 2017-2018 eSt. Petersburg - Isibikezelo esinembile kakhulu se-Hydrometeorological Center
Ubusika 2017-2018 eSt. Petersburg luzoqhwaqhwa futhi lube lukhuni. Kodwa-ke, ukungabi khona kwelanga elihlala eNorth Palmyra akusekumangazi. Mhlawumbe, bebeyobe besaba kakhulu ngenxa yokushisa kwama-Epiphany. Uma sikholwa izibikezelo ezinembile kunazo zonke ze-Hydrometeorological Center, lokhu ngeke kwenzeke. Ukushisa okubusika okubusika kuyoba khona -6⁰C, okuyizinga eliphakeme kakhulu kuneMoscow, kodwa ngenxa yomswakama ophezulu, umoya uzobonakala ubomvu.
Ngokusho kwezibikezelo sezulu se-Hydrometeorological Center, imijikelezo ephindaphindiwe yeminyaka ephakeme yokushisa iyabonakala eSt. Petersburg. Ukucabangela ubusika obufudumele ngo-2007, kule ndawo kungenzeka ukuba ubikezele ukufika kwesikhathi sezulu okubandayo ngo-2017-2018. Ngokwezibikezelo zesandulela sezulu, kakade ekwindla ngasekupheleni kuka-2017, izakhamizi zaseRussia nase-Ukraine zilinde iqhwa. Ngesikhathi esifanayo eSt. Petersburg kuyomvula - ukushisa kwangempela kuzofika lapha emva komhlaka 15-20 Januwari. EMoscow, kushiwo ukuthi isimo sezulu esiphezulu, kodwa somoya esiphezulu sinamazinga okushisa angaba ngu -8 ⁰C. Ngakho, ukwazi ukuthi kuyoba yini ubusika buka-2017-2018, ungalungiselela kusengaphambili ngomhlangano wakhe.
Ngiyayithanda eyodwa, kodwa ngihlala nomunye: Yini okufanele ngiyenze?
Izinkanyezi zaseRussia eziphezulu kakhulu ezingu-7, ezamelwa abezindaba ngesikhathi sokuphila kwabo
Imikhonzo Ehle kakhulu Unyaka Omusha Wonyaka 2016, unyaka weMonkey elivuthayo!
I-Sorrel: zokupheka ezingcono kakhulu ngesithombe, ukuvuna ebusika
Izinkondlo zezingane mayelana nesikole, othisha nabaqondisi - ezinhle, ezithinta futhi ezihlekisa
Indlela yokuwa ngothando nomfana: izindlela ezingu-10 ezinhle kakhulu
Izinzuzo eziyisikhombisa zomyeni wesifazane: Kungani kungalungi ukuhlala noDon Juan
Izinkolelo-ze zaseRashiya ziletha inhlanhla nokuhluleka
Inkulumo engagwegwesi ngokuphathelene nezingane zocansi
Ama-sandwich ngamakhiwane, arugula ne-parmesan
I-Quinoa ne-broccoli, i-rucola ne-Feta ushizi
Ukuzivocavoca ukukhulula ubuhlungu emhlane ophansi
I-saumoni elicwengile ku-grill
Izimpawu ezizosiza ukuheha inhlanhla nengcebo
U-Alexey Chadov ezindabeni zakamuva
Ukuhamba kokuqala kwe-fetus kwisisu esingaphansi
I-salmon ebhaka kuhhavini
Kungani isifo sezinso sakha i-edema?
Indoda enhle isaba ukuhlangana
Beefsteak ngaphandle kwegazi
Ukukhanyisa okufanele kwefulethi
Ngesikhathi uKhisimusi ukudlala 2015-2016 kuqala ngokusho kwezingoma zesonto
I-Cystitis yisifo esiyingozi besifazane
Indlu yangasese esondelene nayo nsuku zonke